Plugins-yada ugu Wanaagsan ee Goobaha Ganacsiga WordPress
Caannimada plugin WordPress qaar ka mid ah waxaa kaxeeyay rakibaadyo shaqsi ama macaamiisha ku saleysan. Ka warran ganacsiga? Waxaan meel dhignay liis ka mid ah kuwayada plugins WordPress jecel taas oo aan aaminsanahay in ay awood u siiso isticmaalayaasha ganacsiga inay ka faa'iidaystaan ​​​​waxyaabahooda oo ay ku kaxeeyaan natiijooyinka matoorada raadinta iyo warbaahinta bulshada, moobaylka, tablet-ka ama desktop-ka ... oo ay si buuxda u dhexgalaan xeeladahooda bulsho iyo muuqaal.
Anigoo horumariyay qaar ka mid ah plugins-yada caanka ah ee WordPress, waxaan had iyo jeer aad u xiiseeyaa helida iyo wadaagista plugins ee qabta shaqo cajiib ah si kor loogu qaado, kor loogu qaado, oo otomaatig ugu sameeyo hawlaha gudaha WordPress. plugins WordPress waa labadaba duco iyo habaar, in kastoo.
Arrimaha Plugin WordPress
Plugins wuxuu ka tagi karaa tan xogta keydkaaga… Xitaa kadib markaad tirtirto fiilada. Horumariyayaashu way hagaajin karaan tan, laakiin inta badan kama walwalin arrintaas.
Waxaan rumeysanahay in WordPress ay si dhab ah kor ugu kacday, oo ay ka dhacayso waxyaabihii hore ee fiilooyinka ahaa ee keydkooda lagu keydin jiray ka dibna ay ku ansixin jireen qalab cusub si ay u hubiyaan inaysan si xun u qorin. Maaddaama tusaalooyinka WordPress ee is-martigeliya ay kuu oggolaanayaan inaad rakibto wixii qalab ah, inkasta, waa inaad sameysaa shaqada guriga ama aad ka heshaa ilo lagu kalsoon yahay oo talo bixinno ah.
Intaa waxaa sii dheer, qaar badan oo ka mid ah Liisaska ugu Wanaagsan ee WordPress waxay ku habboon yihiin blogger-ka gaarka ah oo dhab ahaantii ha diiradda saarin ganacsiyada iyo dadaalkooda gaarka ah ee qaabaynta iyo horumarinta xeeladaha nuxurka ka caawiya kor u qaadista ganacsigooda. Sidoo kale, dhammaanteen waan ognahay taas ugu fiican waa erey shakhsi ah… markaa waxaanu raacaynaa kuwa jecel si aan u kala saarno talooyinkeena.
Hoos waxaa ku yaal go'an la isku dayay oo run ah Qalabka WordPress ee ganacsiga waxaan aaminsanahay inay yihiin kuwa ugufiican muuqaalka balaaran ee WordPress plugins.
Plugin ugu Fiican WordPress ee Kaabta Goobta iyo Socdaalka
WP guurto - Waxaa jira dhowr plugins oo aad u fiican oo loogu talagalay samaynta nuqullo fudud iyo guuritaan, laakiin markaad u baahan tahay inaad si dhab ah u hesho faylasha, mawduucyada, iyo plugins si aad u kaydiso ama u guurto, plugin this ayaa ka sarreeya rajo kasta. Sidoo kale, waxaad si fudud u dhaqaajin kartaa boggaga midba midka kale - xitaa adigoo hoos u dhigaya ogolaanshaha goobuhu ay riixi karaan ama isku jiidan karaan midba midka kale.
Plugins-yada WordPress-ka ee ugu Wanaagsan si ay uga qayb-galaan oo u beddelaan booqdayaasha
DhacdoON - Haddii aad raadinayso in si fudud ku darto dhacdooyinka, iyo diiwaangelinta guud ahaan meelo badan oo ganacsigaaga, plugin this labadaba si fiican loo taageeray oo uu leeyahay tan ka mid ah sifooyinka.
Foomamka cuf - Qaab-dhismeed deg deg ah oo fudud oo leh xulasho qaabeyn kala duwan oo si fudud loogu dhex daray adeegyada dhinac saddexaad sida PayPal, Mailchimp, AWeber, iyo kuwo kale. Add-ons iyo API ayaa diyaar u ah shaqada la xoojiyey. Haddii aad isticmaalayso Qaybta Pro, uma baahnid maadaama Foomamku yihiin astaamo ka mid ah.
Jetpack - Jetpack wuxuu sii wadaa inuu ku sii wanaajiyo noocyada bilaashka ah iyo kuwa la bixiyo ee kordhiya awooda boggaaga WordPress. Laba astaamood oo muhiim ah waxaan aaminsanahay inay yihiin awooda wadaagga bulshada isla markaana ku qori karo kor u qaadista emaylka. Waxaa jira tan oo astaamo kale ah, in kastoo! Waxa ugu wanaagsan oo dhan, qalabkan waxaa soo saaray Automattic si aad u ogaato inuu ku qoran yahay loona hayo heerarka ugu sarreeya.
Plugins-yada ugu Wanaagsan ee WordPress si loo horumariyo Maamulkaaga WordPress
Disable Comments - Faallooyinka ayaa faa'iido weyn u leh labadaba qiimeynta raadinta iyo ka-qaybgalka booqdayaasha boggaaga; si kastaba ha ahaatee, sanadihii ugu dambeeyay faallooyinka spamming waxay noqdeen kuwo aan la maarayn karin waxayna sheekadu u guurtay kanaalada warbaahinta bulshada. Plugin Tani waxay joojin doontaa dhammaan sifooyinka la xiriira faallooyinka oo ka saari doona qaybaha faallooyinka in lagu daabaco goobtaada. Waxaad sidoo kale tirtiri kartaa dhammaan faallooyinka la daabacay.
Boostada Dheeraadka ah - Haddii aad waligaa u baahato inaad nuqul ka sameysid waxa ku jira, plugin-kani waxa uu ku siinayaa koontarool kooban oo ku saabsan doorarka nuqul ka dhigi kara waxa ku jira, waxa curiyayaasha la koobiyay, iyo in ka badan.
Login ku meel gaadh ah oo bilaa sir ah - waxaa jira waqtiyo aad rabto inaad bixiso mawduuc ama horumariye plugin si ku meel gaar ah u geli kara tusaale ahaan WordPress… laakiin ma mari kartid habka aad isku diwaangeliso oo aad u hesho furaha sirta ah emaylka. Pluginkani waxa uu bixiyaa xidhiidh toos ah, ku meel gaadh ah oo ay ka faa'iidaysan karaan si ay u galaan goobtaada si ay kuu caawiyaan. Waxaad awoodaa inaad dejiso wakhtiga dhicitaanka sidoo kale.
WP Mail Log - haddii aad waligaa la yaabtay in emayl laga soo dirayo goobtaada PHP ama SMTP, WP Mail Log waa plugin muhiim ah si loola socdo farriintaada dibadda ah.
WP Dhammaan Soo Dejinta - Soo-ururinta plugins-yada si cajiib ah u dabacsan oo loogu talagalay soo dejinta iyo dhoofinta xogta faylasha XML iyo CSV gudaha iyo ka bixista WordPress iyo tiro plugins caan ah.
Plugins-yada WordPress ee ugu Wanaagsan ee Qaabka iyo Tafatirka
Aaladaha qoraalka hodanka ah ee horumarsan ee Gutenberg - Haddii aad u baahan tahay habayn dheeri ah oo ku jirta tifaftiraha caadiga ah ee Gutenberg ee leh WordPress, oo ay ku jiraan koodka, qoraal-hoosaadka, qoraalka sare, qoraalka khadka, iyo tafatirka midabka asalka… plugingan fudud wuxuu bixiyaa dhammaan awoodaha.
Qaybta Pro - Tifaftiraha asalka u ah WordPress wuxuu leeyahay wax badan oo la doonayo oo aad buu u niyad jabi karaa. Elementor wuxuu la yimid da 'weyn tifaftiraha WYSIWYG, foomam, isku -darka, qaab -dhismeedka, qaab -dhismeedyada, iyo daraasiin ikhtiyaarro kale oo leh dhowr plugins oo la socda si loo kordhiyo. Ma hubo inaan waligay dhisi doono goob la'aan la'aanteed!
Plugins-yada WordPress ee ugu Wanaagsan si ay kor ugu qaadaan waxa ku jira iyo gaaritaankaaga
ARVE Advanced Responsive Video Embedder - Fiidiyowyada ku dhex jira waxay noqon karaan riyo ku sii jirista qaabaynta jawaabta ee goobtaada. WordPress asal ahaan waxa uu dhexgeliyaa daraasiin aalado ah laakiin ma hubiso in ay ka jawaabayaan.
Easy Soodheelka Share-ka - Waxay kuu sahlaysaa inaad la wadaagto, la socoto, oo aad kordhiso taraafikadaada bulsheed iyada oo la adeegsanayo habayn iyo Analytics muuqaalada.
Hal Signal - riixitaanka mobilada, riixida websaydhka, emaylka, iyo farriimaha app-ka ah. Ogeysiis macaamiisha leh qoraal kasta oo la daabacay.
Widget Player-ka Quditaanka Podcast - Kani waa aalad aan shaqsiyan u soo saaray oo caan ah. Haddii aad martigalinayso Podcast-kaaga meelo kale, waad gali kartaa quudinta oo waxaad gelinkartaa qarkaaga Podcast-kaaga dhinacaaga ama adoo adeegsanaya lambar gaaban oo ku dhex yaal bog ama dheji Waxay isticmaashaa WordPress 'asalka HTML audio player.
ProfilePress - WordPress hadda wuxuu kuu ogolaanayaa kaliya inaad isticmaasho avataar qaas ah oo lagusoo rogo Gravatar. WP User Avatar wuxuu awood kuu siinayaa inaad u isticmaasho sawir kasta oo lagusoo galiyay Maktabadaada Warbaahinta sidii avatar ahaan.
Plugins-yada WordPress ee ugu Wanaagsan si aad u Wanaajiso Boggaga WordPress
WordPress SEO -Math Rank waa Plugin SEO khafiif ah oo ay ku jiraan falanqaynta nuxurka bogga, khariidadaha bogga XML, qaniinyo hodan ah, dib-u-hagaajin, kormeer 404, iyo tan astaamo dheeri ah. Nooca pro wuxuu leeyahay taageero aan caadi ahayn oo loogu talagalay goosgoos hodan ah, meelo badan, iyo inbadan. Waxa ugu fiican oo dhan, koodhku si aad u wanaagsan ayaa loo qoray oo ma yareeyo bartaada sida ugu badan ee WordPress SEO plugins.
Plugin ugu Fiican WordPress ee Kukiyada iyo U Hogaansanaanta Xogta
Ganacsi ahaan, waxaad u baahan tahay inaad u hoggaansanaato xeerarka caalamiga ah, federaalka, iyo gobolka ee xukuma sida aad ula socoto oo aad u ilaaliso xogta martidaada. Waxaan u isticmaali jiray qalabka 'Jetpack widget' rukhsadaha cookie-ka, laakiin badanaa waxay rartaa wax ka badan hal jeer oo ma lahayn xulashooyin habayn ah.
Plugins-yada WordPress ee ugu Fiican si loo ilaaliyo Boggaga WordPress
VaultPress - Ku ilaali waxa ku jira, mawduucyada, plugins, iyo dejinta wakhti-dhabta ah iyo iskaanka amniga tooska ah.
Diiwaanka Waxqabadka WP - Plugin-ga waxqabadka WordPress ee ugu dhammaystiran si loo xafido diiwaanka isbeddelada isticmaalaha, loo fududeeyo cilad-baadhista, loona aqoonsado dabeecadaha laga shakiyo goor hore si looga hortago jabsiga xaasidnimada leh. Hadii aad ku biirto Ammaanka Jetpack or Jetpack Professional Waxaad sidoo kale helaysaa Log Dhaqdhaqaaqa oo dhamaystiran.
Waxaa jira waxyaabo aad u fiican, oo lacag bixin ah oo si buuxda loogu taageeray Dulucda inaadan meel kale ka heli doonin Shirkadda waalidka ah, Envato, waxay qabataa shaqo weyn oo hubinaysa in fiilooyinka la taageero oo la cusbooneysiiyo badanaa.
Tags: Akismetplugins ugu fiicanugu fiican plugins WordPressplugins wordpress ganacsigaccpacdnplugin waafaqsansiyaasadda cookiedhejisyo nuqul ahplugins jecelplugins wordpress jecelGDPRqalabka googlegutenbergciyaaryahanka PodcastPubSubHubbubmarin qabsi dhakhso lehxisaab xisaabeeddib u wareejintafatirka qoraalka qani ahwaddoplugins widgetwidgetsWordPresslog xisaabinta wordpresswordpress plugin pluginwordpress cdnwordpress cdn pluginWordPress ecommerce pluginwordpress foomamka pluginplugins WordPresswordpress Podcast pluginwordpress smtp pluginwordpress plugin share bulshadawp gantaal
Sida Loo Doorto Qaab-dhismeedka Shakhsiyaadka Iibsadaada ah
TaskHuman: Platform Tababarka Iibka Dijital ah ee-Waqtiga dhabta ah